♪ “လူမှုကွန်ရက်သုံးသူများ သတိထား” ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
♪ “လူမှုကွန်ရက်သုံးသူများ သတိထား” ♫
ခေတ်က လူမှုကွန်ရက်မသုံးလျှင်ပင် ခေတ်မမီတော့ဟုဆိုရမည့်ခေတ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မတွေ့ရသည့် မိတ်ဆွေ အချင်းချင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ တွေ့ကြသည်။ သာကြောင်း၊ မာကြောင်း ပြောကြသည်။ သာရေးနားရေ ဖိတ်ကြသည်။ ကြွားစရာရှိသည်တို့ကိုလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးသိသွားအောင် ကြွားမဟဲ့ဟုဆိုကာ Public လုပ်ထားပြီး ကြွားသူတွေရှိသည်။လူမှုကွန်ရက်မှာ account လုပ်သည့်အခါ အချင်းချင်းအမှန်အတိုင်း သိမြင်ရအောင် အချက်အလက်အမှန်တွေ ဖြည့်စွက် ခိုင်းသည်။ အမည်မှန်၊ လိပ်စာမှန်၊ ဖုန်းနံပါတ်အမှန် တွေထည့်ရသည်။
အချင်းချင်း ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းဆက်ဆံပါ ဟုလည်း လူမှုကွန်ရက်က တိုက်တွန်းသည်။ စေတနာ နှင့်ပါ။ သို့သော်လူမှုကွန်ရက်တို့အား ဟက်ကာမှ ချိုးဖောက်ဝင်ရောက် သည့်အခါ စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်ရပါတော့သည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လူမှုကွန်ရက်ဖောက်ထွင်းခံရမှုများက ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး ဖောက်ထွင်းခံရသည့် site မှာ linkedin၊ ထို site က ဂုဏ်သရေရှိလူကြီး လူကောင်းများ၊ ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိကြီးများ စုဝေးသည်ဟု နာမည်ကျော်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် ဟက်ကာက မျက်စိကျပြီးဖောက်ထွင်းခဲ့လေသလား။ နောက်ထပ် အဖောက်ခံရသည့် site တို့မှာ Mg Space နှင့် Tumblr ။ယင်းတို့မှာ Facebook မပေါ်ခင်က ဦးစွာပေါ်သော်လည်း ယခုအချိန်မှာအလွန်တရာ လူကြိုက်များသည့် အခြေအနေတွင်မရှိတော့။ သို့ပါလျှက် အဘယ်ကြောင့် ဟက်ကာက ဖောက်ထွင်းခဲ့ပါသနည်း။
ဖောက်ထွင်းသည်ဟုဆိုရာ၌ သေးသေးကွေးကွေးမဟုတ်။ လူမှုကွန်ရက်များ၌ account hack သည်ဆိုသည့်ကိစ္စမှာ မထူးခြား။ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ နာမည်ကျော်သူ တို့၏ account ၊ ငွေကြေးချမ်းသာသူတို့၏ account ကိုသာ hack တာများသည်။ hack ခံရသော account အရေအတွက်သည် ရာဂဏန်း မျှသာရှိသဖြင့် များလှသည်ဟု မဆိုသာ။ ယခု Linkedin၊ My space နှင့် Tumblr တို့အား hack ရာတွင် account ပေါင်းသန်းရာကျော်ပါသွားသဖြင့် အလွန်ကြီးမားသော ဖောက်ထွင်း မှုဟုဆိုနိုင်သည်။ ဖောက်ထွင်းမှုကို တစ်ရက်တည်းနှင့် အပြီးလုပ်သည်မဟုတ်။ ရက်အလီလီကြာအောင် အချိန် ယူပြီးစိမ်ပြေနပြေ ဖောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။Linkedin မှပါသွားသည်မှာ account (၁၁၇)သန်းအတွက် email နှင့် password များဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ရက်အမျိုးမျိုးမှာ ဖောက်ထွင်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ အံ့သြဖို့ကောင်းလှပါ၏။ My space မှာမူ account ပေါင်း(၃၆၀) သန်း၏ အတွင်းရေးအချက်အလက်များပါသွားသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာပင် Share အလုပ်ခံရသည်က ဆိုးလှပါ၏။ Tumblr မှ ပါသွား သည်က Linkedin နှင့် My space တို့မှာထက်နည်း၏။ နည်းသည် ဆိုသော် လည်း account ပေါင်း ၆၅ သန်း၏ အတွင်းရေးအချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခဲ့ပါ၏။
ယင်း account များကို ဖောက်ထွင်းပြီးနောက် ဟက်ကာများက မည်သို့ လုပ်ကြပါသနည်း။ Password အတော်များများ မှာ အွန်လိုင်းပေါ်သို့ post တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော်တို့၏ password မှာ ရောင်းစားခြင်းခံရ သည်။ ပေါက်ကြားခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်အချို့မှာ သက်တမ်း အတော်ပင်ရနေပြီ။ ရေတွက်သော် Linkedin က အချက်အလက်တို့မှာ ၂၀၁၂ ၀န်းကျင်ကဖြစ်ပြီး My space နှင့် Tumblr တို့မှ အချက်အလက်များမှာ ၂၀၁၃ ပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်သည်။ ယင်း data များ အဘယ်ကြောင့် အွန်းလိုင်းမှ ပေါက်ကြားရသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရ။ သို့သော်သက်ဆိုင်ရာ လူမှုကွန်ရက်တို့အား အသုံးပြုသူတို့ကို account များဖောက်ထွင်းခံရကြောင်း နှိုးဆော်အသိပေးခဲ့သည်။
ဖောက်ထွင်းခံရပြီးသော account များကိုလည်း disable လုပ်ခဲ့သည်။လူမှုကွန်ရက်မဟုတ်သော်လည်း ဖောက်ထွင်းခံရသည့် နာမည်ကြီးကွန်ရက်များလည်း ရှိသေးသည်။ ယင်းမှာ အွန်လိုင်းအခြေပြု remotehelp too ဖြစ်သည့် Teamviewer ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ site က ဖောက်ထွင်းခံရခြင်းမရှိပါဟု ငြင်းဆိုသည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူအများစုက သူတို့၏ PC များ hijack အလုပ်ခံရကြောင်း၊ သူတို့ account များထဲမှ ငွေ ကြေးများလျော့ပါး သွားကြောင်း တိုင်တန်းမှုများရှိသည်။ လူမှုကွန်ရက်တို့အား ဤသို့ဖောက်ထွင်းမှုများ ရှိပင်ရှိနေသော်ငြား လည်း Facebook လို လူမှု ကွန်ရက်ကြီးများတွင် ကားသုံးစွဲသူသန်းထောင်ချီ၍ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြီးကြီး မားမားအဖောက် မခံရခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဖောက်ထွင်းခံရသော ကွန်ရက်များရှိဖောက်ထွင်းခံ account တို့ အား ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်၍ အရေအတွက်အားဖြင့် ရှိနေသော်လည်း account အတော် များများမှာ active မဖြစ်တော့ပါ။ လူမှုကွန်ရက်များ ဖောက်ထွင်း ခံရချိန်က သတင်းစာတွင် စာလုံးမည်းကြီးများဖြင့် အဖွင့်သတင်းတွင်ပါခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လူမှုကွန်ရက်ရှိ မိမိ account မှာဖောက်ခံရသည့်ထဲ ပါသွားပြီ လားဟု စိုးရိမ်စရာရှိသည်။ ထိုကိစ္စကိုစစ်ဆေးလိုလျှင် Have I been pwned (www. haveibeenpwned. com) ဟူသော website သို့ သွားရောက် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထို data သည်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ဖြစ်ရာ ပထမဦးစွာအသုံးပြုသော အီးမေးလိပ်စာကို ထည့်ခိုင်းပါမည်။ ယင်းကိုအခြေပြု၍ data များ ပေါက်ကြားထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါမည်။
ထိုသို့ စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် မိမိ၏ data များအား အခြားသူက ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းရှိ /မရှိ "owned" ကိုသိနိုင်ပါမည်။ ထိုဝေါဟာရကို အွန်လိုင်း ဘာသာစကားဖြင့်ပြောသော် pwned ။ အခြားသူက မိမိ၏ data များအား ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဟုဆိုလျှင် Login details များကို ပြောင်းရန်လိုမလို ဆုံးဖြတ်ရ ပါတော့မည်။ လူမှုကွန်ရက်တို့သည် နောက်ကျသော ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် account များကို လုံခြုံမှုပေးဖို့ကြိုးစားနေသည်ကိုလည်း သတိပြုရပါမည်။ hack ခံရသော My space account များဆိုလျှင် Login အားလုံးကို disable လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို account နာမည်ဖြင့် ပြန်သုံးလိုသည်ဟုဆိုလျှင် account ကိုမိမိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း သက်သေပြဖို့လိုသည်။ အတွင်းမှ data အားလုံးပါသွားပြီဖြစ်၍ account ဟောင်းကို ပြန်မသုံးခြင်း က သင့်တော်ပါ လိမ့်မည်။
အန္တရာယ်အများဆုံး user များမှာ password တစ်မျိုးတည်းကိုပင် အွန်လိုင်း ၀န်ဆောင်မှုမျိုးစုံအတွက် လှည့်သုံးသူများ ဖြစ်သည်။ ဟက်ကာသည် website တစ်ခုအား ၀င်သည့် email နှင့် password တို့ အားရထားပြီးပြီဟုဆိုလျှင် Gmail ၊ Amazon စသည့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင်လည်း ယင်းကိုသုံး၍ ၀င်ဖို့ ကြိုးစားကောင်းကြိုးစားနိုင်သည်။ ငွေသွင်းပြီး ပစ္စည်း (စာအုပ်၊ သီချင်း၊ App) စသည်တို့ဝယ်ထားလျှင် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ဟက်ကာလက်တွင်ပါသွား သော အီးမေးသည် တကယ်တွင် မသုံးသင့်တော့။ Login detail များကို မိမိကပိုင်သလို ဟက်ကာကလည်းပိုင်နေသည်။ မိမိပိုင်အီးမေးအား မိမိ ဖွင့်ကြည့်နိုင်သလို ဟက်ကာကလည်းဖွင့်ကြည့်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ မိမိပြုလုပ် သော လျှို့ဝှက်ကိစ္စများကိုလည်း သိနိုင်သည်။ လူသိမခံနိုင်သော အကြောင်း အရာများ သူ့လက်ထဲ ရောက်နေပြီဆိုလျှင် ပြန်ပေးကြေးတောင်းနိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာသုံးနိုင်သော မာစတာကတ်၊ ဗီဇာကတ်တို့မှတစ်ဆင့် ငွေပေးခိုင်း နိုင်သလို Bitcoin လို အွန်လိုင်းငွေကြေးဖြင့်လည်း ပြန်ပေးကြေးတောင်းနိုင် သည်။ထို့ကြောင့် ဟက်ကာလက်ပါသွားသည်မှာ သေချာသလောက်ရှိ နေသော email account, social media account တို့ကို မသုံးသင့်တော့သလို ယင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် password များကိုလည်း မသုံးသင့်တော့ပါ။ password တစ်မျိုး တည်းနှင့် account ပေါင်းစုံသုံးနေသည်ဆိုလျှင် ဖောက်ထွင်းမခံရသေးသည့် account အားလုံးတွင် password လိုက်ပြောင်းရ ပါလိမ့်မည်။ ဖောက်ထွင်းခံရသော လူမှုကွန်ရက်များက password resetting ပြုလုပ်ပေးနေသည်ဟု ဆိုသော်လည်း စိတ်ချထား၍မရပါ။ မည်သည့် password ပါသွားသည်ကို အွန်လိုင်းပေါ် post တင်မှ သိနိုင်၍ဖြစ်သည်။ Linkedin လိုကွန်ရက်မှာ ၂၀၁၂ က တည်းက လူမသိသူမသိ ဟက်ခံနေရ သည်ဖြစ်ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲရောက်မှ action ယူနေခြင်းသည် မထိရောက် တော့ပါ။ လူမှုကွန်ရက်သုံးသူအားလုံး သတိရှိနိုင်ကြပါစေ။